Tonga ny 5G tamin'ny volana Janoary nankany Espana | Androidsis
Ny 5G dia ho tonga any Espana manomboka amin'ny volana Janoary
Nandeha elabe ry zareo mahalala antsipiriany bebe kokoa momba ny teknolojia 5G. Miaraka amin'ity haitao vaovao ity dia antenaina faingana kokoa ny fifandraisana. ENY ny fitsambikinana avy any 3G ka hatramin'ny 4G dia niavaka, antenaina fa amin'ity tranga ity dia ho avo kokoa aza. Ka amin'ny ankapobeny dia misy fanantenana vitsivitsy ihany. Hatramin'izao dia mbola tsy fantatra ny momba azy ny fahatongavanao tany Espana. Na izany aza, noho ny tranokalan'ny Minisitra dia efa fantatra izany.
El Ny Minisiteran'ny Indostria, ny fizahantany ary ny fandaharana nomerika dia efa mandray ny dingana voalohany ka hahatratra 5G any Espana. Fanampin'izany, ho vitany haingana kokoa noho ny andrasana ny ankamaroany. Hatramin'ny Janoary ho zava-misy io.
Hanomboka amin'ny Janoary 2018 raha manomboka ny matetika amin'ny frezy 5G voalohany. Dingana iray izay hivoatra miandalana. ny daty voalohany hahavitana dia ny 2020. Raha ny fahalalako azy dia efa zava-misy ny fizotran'ny fampiharana 5G any Espana.
Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny tarika an'ny 3,6 GHz sy 1,5 GHz. Hampiasaina izy ireo mampitombo ny fahafahan'ny fifandraisana amin'ny tanàna. Andrasana araka izany ny fitomboan'ny hafainganana. Ankoatr'izay dia ho hendry izy ireo. ny ny tombana dia eo anelanelan'ny 1 sy 3 Gbps, raha ho 700 MHz kosa ny fikajiana ho an'ny tarika na dia ho avy tsy ho ela aza.
La Ny fe-potoana napetrak'i Bruxelles momba izany dia ny 30 Jona 2020. Amin'ity daty ity dia antenaina fa ny 5G dia ampiharina tanteraka any Espana. Farafaharatsiny mba tokony ho araka ny torolàlana avy amin'ny Vondrona Eropeana. Ka manantena izahay fa ho feno ny fe-potoana.
ny ny mpampiasa dia hahatsikaritra ny fandrakofana tsara kokoa amin'ny fotoana rehetra noho ny 5G. Ankoatry ny fananana fitaomana tsara amin'ny serasera. Satria ilaina ny fifandraisana tsara kokoa. Indrindra amin'ny fandrosoan'ny serivisy vaovao. Ka resaka miandry. Manomboka amin'ny volana Janoary dia tonga any Espana ny 5G ary antenaina ho vonona ny zava-drehetra amin'ny Jona 2020.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny 5G dia ho tonga any Espana manomboka amin'ny volana Janoary
Ny lalao MOBA maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny Android